Mustaqbalka Bruno Fernandes oo waqti loo qabtay & Red Devils oo loo sheegay xilliga ay ogaan doonto go’aanka ugu dambeeya. – Gool FM
Mustaqbalka Bruno Fernandes oo waqti loo qabtay & Red Devils oo loo sheegay xilliga ay ogaan doonto go’aanka ugu dambeeya.
(Portugal) 5 Luulyo 2019. Sporting Lisbon ayaa go’aan ka gaari doonta mustaqbalka kabtankooda Bruno Fernandes maalmaha soo aadan, waxaana la ogaaday waqtiga ay Manchester United ogaan doonto jawaabta kama dambeysta ah ee mustaqbalka xiddigan reer Portugal.
Red Devila ayaa hogaamineysa loolanka xiddigaan loogu jiro, waxaana la baahiyay in goor hore heshiiska shaqsiga ah la isla fahmay, balse aysan labada kooxood wali isla meel dhigin qarashka uu xiddigaan kaga soo dhaqaaqayo Lisbon kuna imaanayo Manchester.
Waxa jira haatan waqti go’an oo loo qabtay in arrintaan xal looga gaaro, wargeyska Correio de Manha ee laga leeyahay Portugal ayaa shaaca ka qaaday in maamulka Sporting Lisbon ay go’aan kama dambeys ah gaari doonaan ka hor Axadda 7-da July, hadii ay u ogolaanayaan inuu ku biiro United iyo hadii kale.
Sida warbixinta lagu qoray, madaxweynaha kooxda Sporting Frederico Varandas ayaa doonaya in mustaqbalka Bruno xal waara laga gaaro ka hor inta aysan kooxdiisa u safrin Switzerland halkaas oo ay kulamo fasax ah kusoo ciyaari doonaan.
Dhinaca kale ciyaartoyda Manchester United ayaa qudhooda u duuli doona Australia dhawaan, waxeyna halkaas kusoo ciyaari doonaan kulamada ay ugu diyaar garoobayaan xilli ciyaareedka cusub, sidaas darteed labada kooxba waxey doonayaan iney xaaladda ogaadaan ka hor inteysan ambabixin.
Waa maxay sababta ay Barcelona ugu qasban tahay iney iska iibiso midkood Vidal, Arthur Iyo Malcom si ay Neymar ula soo wareegto?